ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ဘားအံ နှင့် ဇွဲကပင်မြေ Technological University Hpa-an: About Internet Connection From Myanmar
About Internet Connection From Myanmar
ဆိုဒ်ကိုလာလည်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် ရောက်ပြန်မဖြစ်ရလေအောင် စာဖတ်သူများ အကျိူးရှိစေမယ့် အကြောင်းအရာလေးတွေ ကြိူးစားဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီအကြောင်းအရာလေး ကတော့ လက်ရှိမြန်မာပြည်မှာ အသုံးပြူနေကြတဲ့ အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင် များအကြောင်းပါ။ ဒီအကြောင်းကို မြန်မာမိသားစုဖိုရမ်မှ ကိုပိုးကောင်လေး ရေးသားထားတာပါ။ စိတ်ဝင်စားတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် ဖတ်ရတာ အရသာမပျက်အောင် မူလအတိုင်းဝေမျှလိုက်ပါတယ်။
အားလုံးအတွက် ဗဟုသုတရအောင် နဲ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အသုံးပြုနေတဲ့ Internet Connection တွေအကြောင်းကို တစ်စုတစ်စည်းတည်း ဖြစ်အောင် ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဒီပို့စ်လေးကိုရေးဖြစ်တာပါ။ အားလုံးလဲ သိပြီးသား ဖြစ်ချင်လဲဖြစ်မှာပါ။ တစ်ခုတည်းသော ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ Internet Connection က ဘာအမျိုးအစားတွေရှိတယ်။ ဘယ်လိုမျိုးအသုံးပြုနိုင်တယ် ဆိုတဲ့ ဗဟုသုတလေး ဖြစ်ဖြစ်ရအောင်ပါ။ Internet Connection တွေအကြောင်းကိုလဲ တစ်နေရာတည်းမှာ ဗဟုသုတအနေနဲ့ ဖတ်လို့ရအောင် ပုံလေးတွေ၊ စာလေးတွေနဲ့ တတ်နိုင်သလောက် အသေးစိတ်လေး ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ မှားနေတဲ့အချက်အလက်တွေ၊ နဲ့အခြားကြည့်မရတဲ့ အချက်အလက်တွေရှိရင် နားလည် ခွင့်လွှတ်ပြီးတော့ သည်းခံပေးကြပါခင်ဗျာ။ (ဒါကတော့ နိဒါန်းပေါ့ဗျာ။ . . . . )
မြန်မာနိုင်ငံမှာ လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ Internet Connection များထဲမှ လူသိများပြီးတော့၊ အထင်ရှားဆုံးဖြစ်နေတဲ့ Connection အမျိုးအစားတွေကို ပြောပြပေးမယ်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ အသုံးပြုမည့်သူတွေဟာ Internet Connection အသုံးပြုတော့မယ်ဆိုရင် မိမိတို့ဘာအတွက် Internet Connection ကိုအသုံးပြုမှာလဲ ဆိုတာကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားရပါမယ်။ ဥပမာ - Website တွေကြည့်မယ်၊ Data တွေကို Download; Upload လုပ်မယ် (ဒေါင်းမယ်၊ တင်မယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ အနည်းငယ်လောက်ပဲရှိတဲ့ ဖိုင်ဆိုဒ်အမျိုးအစားကိုဆိုလိုတာ ပါခင်ဗျာ။) ချက်တင်းလုပ်မယ်၊ မေလ်းပို့မယ်၊ ကွန်နက်ရှင်ကောင်းရင် စကားပြောမယ်ဆိုရင်တော့ Dial Up Connection ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် အခြားလုပ်ဆောင်ချက်တွေကော၊ ကွန်ပြူတာကိုတစ်လုံးမက ၅လုံးလောက်ကို Sharing လုပ်ပြီးသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ Broadband Connection အမျိုးအစားထဲက တစ်ခုခုကိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Company; Office နဲ့အခြား Hotel; University တွေမှာဆိုရင်တော့ ADSL Connection ကို Speed နည်းတဲ့ဟာမျိုး၊ မိမိတို့Company အလိုက်ဘယ်လိုမျိုးသုံးရင် ပိုအဆင်ပြေမလဲဆိုတာကို သေချာစဉ်းစာပြီးတော့ Internet Connection အမျိုးအစားတွေကိုရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မှာ Internet Connection အမျိုးအစားတွေဖြစ်ပါတယ်။
1. Dial Up Connection (Dialup Connection မှာနောက်တစ်မျိုး Internet & E-mail Dial up Service ဆိုတာလဲရှိပါတယ်။)
3. Broadband Wireless Local Loop (WLL Connection လို့ခေါ်သလို၊ Broadband connection လိုလဲခေါ်ပါတယ်။)
4. ADSL (Asynchronous Digital Subscriber Line) Broad Band Connection
5. ADSL (Asynchronous Digital Subscriber Line)2Broadband Connection
6. ADSL 2+ (Asynchronous Digital Subscriber Line) )Broadband Connection
7. WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access) Connection
8. Wi-Fi Wireless Connection တို့ဖြစ်ပါတယ်။
အပေါ်က Internet Connection အမျိုးအစားအားလုံးကို မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး (MPT: Ministry of Post and Telecommunication) နဲ့ Bagan Net တို့ကနေ ISP (Internet Service Provider) အဖြစ်အသုံးပြုနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မှာ တစ်ခုချင်းစီရဲ့ အသုံးပြုပုံနဲ့ အခြား သိသင့်တာတွေ ဆက်ဖတ်ကြည့်ရအောင်။
Dial Up Connection ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင် စရိတ်အသက်သာဆုံးနဲ့အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Connection အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံးလိုအပ်တာတွေကတော့ Desktop Computer (သို့) Laptop; Phone Line; Modem and ISP (Internet Service Provider) တို့လိုအပ်ပါတယ်။ Operating System အနေနဲ့လဲ သိပ်အများကြီးမလိုအပ်ပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် ကွန်ပြူတာအမျိုးအစား၊ Hard Disk Space; Memory ; OS ဘယ်အမျိုးအစားရယ်လို့ စိတ်ပူနေစရာမလိုပါဘူးခင်ဗျာ။ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ မည်သည့်နေရာဒေသတွင်မဆို Computer; Digital Phone Line; Modem; Access Kit တို့ရှိပါက အချိန်မရွေးတပ်ဆင်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Connection အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Desktop Computer (or) Laptop နဲ့ Phone Line ရှိပြီဆိုတာနဲ့ Modem ကိုအရင်ဆုံးရှာရပါမယ်။ ဘာဖြစ်လို့ Modem လိုအပ်လဲဆိုရင်တော့ Computer ကနေနားလည်လက်ခံတဲ့ Digital Data တွေကို Analog data (အသံလိုမျိုး) အဖြစ်ပြောင်းပေးမယ့် ကြားခံပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ မိမိတို့ Modem ကနေ Analog data တွေကို ဖုန်းလိုင်းကနေတဆင့် အခြား Modem ကို ရောက်သွားမယ်။ ပြီးတော့အခြား Modem ကနေ မိမိတို့ကွန်ပြူတာတွေဆီကို Digital data အဖြစ်ပြန်လဲပေးပို့ပေးမယ့် အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Modem ရဲ့ Speed ကိုတော့ Kbps (Kilo Bit Per Second)နဲ့သတ်မှတ်ပါတယ်။ Modem ပစ္စည်းဝယ်တိုင်း သူတို့ရဲ့ နံမည်အမျိုးအစားပြီးရင် Data ပို့လွှတ်နိုင်တဲ့ Speed (52Kbps; 56Kbps ဆိုပြီးတော့)ကို ဖော်ပြထားတတ်ကြပါတယ်။ Desktop မှာဆိုရင်တော့ Modem ကိုတပ်ဆင် အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Modem ကတော့ အမျိုးအစားအနေနဲ့ Internal Modem နဲ့ External Modem ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်။ Internal Modem ကတော့ ကွန်ပြူတာအတွင်းထဲမှာ PCI Expansion Slot တစ်ခုထဲမှာထည့်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Board အမျိုးအစား တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ External Modem ကတော့ ကွန်ပြူတာ ဘေးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် တစ်နေရာရာမှာထားပြီးတော့ ပလပ်ထိုးပြီးတော့ အသုံးပြုရတဲ့ Box လေးနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ Internal Modem ထပ်နည်းနည်းဈေးကြီးပြီးတော့ Speed နည်းနည်းနေပါတယ်။ အများဆုံးကတော့ မျက်စိရှင်း သက်သာအောင် Internal Modem ကို အသုံးပြုပါတယ်။ Sharing လုပ်ပြီးသုံးချင်ရင်တော့ External Modem ကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။ Modem Card ၀ယ်တဲ့အခါမှာပါလာတဲ့ Modem Driver ကို Install လုပ်ပြီးတော့ ကွန်ပြူတာတွင် Modem ကိုစတင်အသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ် ပါတယ်။ Laptop မှာတော့ Modem ကို တစ်ပါတည်း ပါတတ်ကြပါတယ်။ Laptop Modem ကတော့ တစ်ခါတည်းပါဝင်နေလို့ Install လုပ်စရာမလိုပါဘူးခင်ဗျာ။ ရိုးရိုး Modem ထပ်အနည်းငယ် Speed လဲမြန်ပြီးတော့ ဖုန်းလိုင်းနဲ့ချိတ်ဆက် အသုံးပြုရင်လဲ အလွယ်တကူ ချိတ်ဆက် နိုင်ပါတယ်။
Phone Line အနေနဲ့ကတော့ Digital Phone Line ဖြစ်ရပါ့မယ်။ Dial Up Connection အသုံးပြုနေတဲ့ အချိန်မှာတော့ ဖုန်းကို အ၀င်၊ အထွက် အသုံးပြုလို့ရနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဖုန်းလိုင်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ အသုံးပြုနေတာဖြစ်လို့ ဖုန်းလိုင်းကျပ်တဲ့ အချိန်တွေမှာဆိုရင် အခက်အခဲအနည်းငယ်တော့ရှိနိုင်ပါတယ်။ မိမိတို့အိမ်ဖုန်းကနေတဆင့် အသုံးပြုရမှာဖြစ်လို့ ရုံးအဖွဲ့အစည်း၊ အင်တာနက်ဆိုင်နဲ့ အခြားဖုန်း အသုံးပြုမှုတွေများတဲ့ မနက်ပိုင်းနဲ့ညနေပိုင်းမှာတော့ Connection Speed ကနှေးနေတတ်ပါတယ်။ ညပိုင်းနဲ့မနက်စောစော ဆိုရင်တော့ Modem Speed အတိုင်း Internet Connection Speed ကိုအပြည့်အ၀ ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ISP (Internet Service Provider) အနေနဲ့ကတော့ Dial Up Connection အတွက် Bagan Net ကနေ ရောင်းချတဲ့ Access Kit ကို ၀ယ်ယူ ထားဖို့လိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Access Kit ကိုဝယ်ယူဖို့အတွက် လျှောက်လွှာတင်စရာမလိုပါဘူးခင်ဗျာ။ Access Kit မှာပါတဲ့ User Name နဲ့ Password ကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့ Internet Connection ကိုချိတ်ဆက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ မိမိတို့အသုံးပြုချင်တဲ့ Access Kit အချိန်အမျိုးအစား (၁၅နာရီ၊ နာရီ ၃၀၊ နာရီ ၆၀) ကိုလိုက်ပြီးတော့ နီးစပ်ရာ Internet Café; Cyber နဲ့အခြားစတိုးဆိုင်များမှာ ၀ယ်ယူရရှိနိုင် ပါတယ်။ Access Kit ထဲမှာ User Name and Password တို့အပြင် မိမိတို့အသုံပြုနေတဲ့ Operating System အမျိုးအစားအလိုက် ဘယ်လိုချိတ်ဆက်အသုံးပြုရမယ် ဆိုတာကို ဖော်ပြပေးထားတဲ့ စာရွက်လေးလဲပါဝင်ပါတယ်။ အခုတော့ အောက်ကလင့်လေးကနေတဆင့် Dial Up Connection ချိတ်ဆက်မှုကို လေ့လာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Start > Control Panel >Network Connection ကိုရောက်အောင်သွားပါ။ (သို့) Start > Connect to > Show all Connection ကနေလဲ တိုက်ရိုက်သွားနိုင်ပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ Network Connections Box ထဲကို ရောက်ရှိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Network Connection box ထဲမှ New Tasks အောက်ရှိ CreateaNew Connection ကိုနှိပ်ပါ။
အဲဒီနောက်မှာတော့ New Connection Wizard ဆိုတဲ့ Box လေးတစ်ခုပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။
1. Connect to the Internet ကို Green Iron bubble လုပ်ထားပေးပါ။ ပြီးရင် Next ကိုဆက်လုပ်ပါ။
2. “Set up my connection manually” ကို Green iron bubble ရွေးပေးပါ။ နောက်ပြီးရင်တော့ Next ကိုဆက်ပြီးတော့ Click ဆက်လုပ်ပါ။
3. ပထမဆုံး “Connect usingadial up modem” ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါ။ ပြီးရင် Next ကိုဆက်နှိပ်ပါ။
4. ISP Name နေရာတွင် “BganNet” သို့မဟုတ် “Myantel” ကိုရိုက်ထည့်ပေးပါ။ ထို့နောက် Next ကိုဆက်လက်နှိပ်ပေးပါ။
5. Phone number နေရာတွင် (146) ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ 146 ကနေတဆင့် Internet Service Provider ကိုအဆက်အသွယ်လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ 146 လိုင်းကိုခေါ်ဆိုပြီးအသုံးပြုတဲ့အတွက် ဖုန်းဖိုးဝန်ဆောင်ခကို ပေးရမှာမဟုတ်ပါဘူး။
6. ထို့နောက် Internet Account Information နေရာတွင် UserName နဲ့ Password ကိုရိုက်ထည့်ပါ။ (User Name and Password ကတော့ Access kit ထဲမှာပါဝင်တဲ့ နံပါတ်လေးများဖြစ်ပါတယ်။) Confrim ဖြစ်အောင် Password ကိုနောက်တစ်ကြိမ်ပြန်ရိုက်ပါ။ ပြီးရင် Next ကိုဆက်လက်သွားပါ။
7. “Addashortcut to this connection to my desktop” ကို check လုပ်လို့ရပါတယ်။ အဲဒါဆိုရင်တော့ မိမိ Desktop မှာ Connection ပုံစံလေးတစ်ခု ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ မထားချင်ဘူးဆိုရင်လည်း ရပါတယ်။ Desktop မှာမထားဘူးဆိုရင် (Start >>Connect to>> BaganNet connection) ဆိုပြီးတော့အဆင့်ဆင့် သွားရပါမယ်။ ပြီးနောက် Finish ကို click လုပ်လိုက်ပါ။
8. Finish လုပ်ပြီးတာနဲ့ “Connect Dial-up Connection” ဆိုပြီးတော့ Box လေးတစ်ခုကျလာ မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီ box လေးမှာ Properties ကို click လုပ်ပါ။
9. ထို Properties box လေးထဲမှ “Option” tag လေးကိုသွားပါ။
10. “Option” tag အောက်ရှိ Redialing Options မှာ Redial attempts, Time between redial attempts and Idle time before hanging up box လေးတွေနေရာတွင် မိမိကြိုက်နှစ်သက်ရာရွေးချယ် ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
11. ထို့နောက်ဆက်လက်ပြီး Networking tag ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ Internet Protocol (TCP/IP) နှင့် QoS Packet Scheduler တို့ကို check လုပ်ပေးပါ။ ပြီးရင် Internet Protocol (TCP/IP) ကိုရွေးပြီးနောက် “Properties” ကိုနှိပ်ပါ။ ပြီးနောက် OK ကို နှိပ်ပါ။
12. အဲဒီနောက်မှာတော့ Internet Protocol Properties box လေးတစ်ခုကျလာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Obtain an IP address automatically ကို check လုပ်ပေးပါ။ နောက်တော့ Use the following DNS server address ကိုရွေးပေးပါ။ ပြီးနောက် 203.81.71.69 နှင့် 203.81.71.73 တို့ကိုရိုက်ထည့်ထားပါ။ အဲဒီနောက်မှာတော့ OK ကို click လုပ်လိုက်ပါ။
နောက်ဆုံးမှာတော့ OK ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ထို့နောက် Connect Bagan Net Box လေး ဆီမှာရှိတဲ့ Dial ကို Click လုပ်လိုက်ပါ။ အဲဒီနောက်မှာ Modem နဲ့ ဖုန်းကနေတဆင့် ဖုန်းခေါ်သလိုမျိုး အသံကြားရပြီးတော့ Modem မှ အသံရှည်ကို ကြားလိုက်ရပြီးဆိုတာနဲ့ Internet Connection ချိတ်ဆက်မိသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းလိုင်းအားမယ်ဆိုရင် (သို့) လိုင်းရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ ချက်ချင်းကို Internet ကိုချိတ်ဆက်မိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ မိမိတို့ရဲ့ Computer ရဲ့ Taskbar မှာ Computer နှစ်လုံးဆင့်ပုံလေးနဲ့ မီးလေး လင်းလိုက်၊ မှောင်လိုက်ဖြစ်ကာ Bagan Net Connection is now Connected ဆိုတဲ့ စာတမ်းလေးနဲ့ Speed (52Kbps; 54Kbps; 56Kbps) ဆိုတဲ့ အကြောင်းလေးကို ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Dial Up Connection ရဲ့ အားသာချက်ကတော့ - အများကြီးသိပ်မရှိပါဘူး။ အိမ်မှာ အလွယ်တကူ အသုံးပြုနိုင်တယ်။ အလွယ်တကူ တပ်ဆင်ရလို့ အချိန်ကုန်ခြင်းနဲ့စရိတ်စက သက်သာမှာဖြစ်ပါတယ်။
Dial Up Connection ရဲ့ အားနည်းချက်ကတော့ - Connection Speed က Kbps လောက်ပဲရတော့ နှေးတယ်လို့ ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဖုန်းလိုင်းနဲ့ တပ်ဆင်ပြီးတော့ အသုံးပြုရလို့ ဖုန်းလိုင်းကျပ်တဲ့ အချိန်တွေဆိုရင် Connection Speed နှေးမယ်။ Internet အသုံးပြုနေလို့ ဖုန်းဆက်လို့မရတာတွေရှိမယ်။ အောက်မှာတော့ Internet; ISP; Phone Exchange; Modem တို့ ဘယ်လိုဆက်သွယ်လဲ ဆိုတာကိုပြထားတဲ့ ပုံလေးကို လေ့လာကြည့်ရအောင်။
နောက်အပေါ်မှာပြောထားတဲ့အတိုင်း Dial Up Connection နောက်တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Internet & E-mail Dial Up Service အကြောင်းလေး ကိုလေ့လာကြည့်ရအောင်။ သူ့ကိုတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ Broadband Connection အမျိုးအစားတွေမရှိတုံးက Company အချို့နှင့် ရုံးအချို့ မှာ အသုံးပြုခဲ့ရတဲ့ Connection အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ တော်တော်လေးကို မသုံးကြသလို၊သိတဲ့လူတွေလဲ သိပ်မရှိတော့ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့မသုံးတော့လဲဆိုတာကတော့ အခုခေတ်မှာ Broadband တို့လိုမျိုး Connection Speed ပိုမြန်တဲ့ဟာတွေ ထွက်ပေါ်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်။ Internet & Email Dial Up Service ပေးတဲ့ Connection အမျိုးအစားကတော့ ရန်ကုန်တစ်ခုတည်းမှာပဲ အရင်ကအသုံးများခဲ့တယ်။ ကွန်နက်ရှင် Speed ကတော့ Dial Up ရိုးရိုး Connection ထပ်အနည်းငယ်မြန်တာကလွဲပြီးတော့ ဈေးကြီးပါတယ်။ Internet & Email Dial Up Connection ကိုသုံးမယ်ဆိုရင်တော့ MPTဖြစ်ဖြစ်၊ Bagan Net မှာဖြစ်ဖြစ် လျှော်လွှာတင် ပြီးတော့ အသုံးပြုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ လျှောက်လွှာတင်ထားပြီး (၂)ပတ်ကနေ(၄)ပတ်ကြာတော့မှာသာလျှင် Connection လိုင်းကိုချပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံးလိုင်းရပြီးဆိုရင် User Name နဲ့ Password ကိုချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးရင်တော့ နှစ်စဉ်ကြေး၊ လစဉ်ကြေးတွေ ပေးသွင်းပြီးတော့ မိမိတို့လိုချင်တဲ့ Connection အမျိုးအစားအလိုက် FEC 10 ကနေစတင်ပြီးတော့ သုံးချင်တဲ့နာရီအလိုက်နှင့် အပိုသုံးမိတဲ့ နာရီတွေအတွက် ပိုက်ဆံသွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Email Account ကတော့ စလုပ်ကတည်း တစ်ခု အနည်းဆုံးကနေ အများဆုံး ၂၅ ခုအထိ ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Connection အမျိုးအစားတွေအနေနဲ့ Student Plan; Consumer Plan; Enterprise Plan ဆိုပြီးတော့ရှိပါတယ်။ အသုံးလဲသိပ်မများတော့လို့၊ အခုလက်ရှိလဲ Internet & Email Dial Up Service ကိုမချပေးတော့တာတွေရှိလို့ ဒီလောက်လေးနဲ့တင် ဗဟုသုတအနေနဲ့ပြောပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။
နောက်နေ့မှာတော့ iPSTAR Connection အကြောင်းလေးထပ်ပြောပြပါမယ်။ Connection အားလုံးကို တစ်ခုတည်းနဲ့ပို့စ်တင်ရင် အရှည်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ ပုံတွေလဲအများကြီးဖြစ်မယ်၊ ဖတ်ရတဲ့လူလဲ အဆင်ပြေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Connection အားလုံးရဲ့ အားသာချက်၊ အားနည်ချက်၊ ဘယ်လိုနေရာတွေကို အသုံးပြုနိုင်လဲ ဆိုတာကိုလဲ တတ်နိုင်သလောက် ပြောပြပေးထားပါမယ်။ အဲဒါကြောင့် Connection အမျိုးအစားလိုက် တနေ့တစ်မျိုး (သို့) နှစ်မျိုး တင်ပေးသွားပါ့မယ်။ ပို့စ်အရေအတွက် များစေချင်လို့လုပ်တဲ့သဘော မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။